Mponina sy toeram-ponenana: tamin’ny taona 1993 no nisy fanisana farany teto Madagasikara | NewsMada
Mponina sy toeram-ponenana: tamin’ny taona 1993 no nisy fanisana farany teto Madagasikara
Tokony ho isaky ny 10 taona ny fanisana ny mponina sy ny toeram-ponenana (RGPH)* ao amina firenena iray, araka ny fepetra nomen’ny Firenena mikambana. Tsy voahaja io 10 taona io eto Madagasikara, taorian’ny taona 1993, nisy fanisana farany.
Amin’izao volana desambra izao, nilaza hamoaka tarehimarika vaovao momba ny mponina sy ny fonenana ny Instat. 25 taona taorian’ny fanisana farany izany, hanitsiana na hanamarinana ny tombatombana hatramin’izay. Nomarihin’ny Instat voalohany fa misy lalàna manasazy ireo olona manome vaovao tsy marina. Ao anatin’izany lalàna izany ihany ny fiarovana ny tsiambaratelo. Ho fitandroana ny marina rehetra, misy fombafomba natao nanatanterahana izany asa izany, raha ny voalazan’ny Instat. Ny hoe tsy misy latsaka, sarotra fa ezahina ny hamoahana tarehimarika marina be indrindra, araka ny nambaran’ny Instat ihany.
Mitaky tarehimarika mazava momba ny mponina ny famolavolana fandaharanasa ho an’ny toekarena sy ny sosialy, ny fanaraha-maso izany sy ny fanaovana tomban’ezaka. Io antontanisa io no hany azo antoka hananganana tetikasa manomboka any amin’ny faritra hatrany amin’ny fokontany. Izany, ohatra, ny hahafantarana ny fari-piainan’ny mponina, vavy na lahy, araka ny taonany, ny faritra misy azy.
Antontanisa fototra fampiasa …
Ilaina araka ny takin’ny Firenena mikambana izany RGPH izany, tokony havaozina isaky ny 10 taona. Ankoatra ny lafiny teknika, antontanisa fototra fampiasa ho an’ny lafin-javatra maro, fotodrafitrasa, fanabeazana, fahasalamana, sns. Efa lany andro hatramin’izao ny antontanisa misy, momba ny mponina, raha niaingana nanaovana tetikasa ho fampandrosoana ny firenena na eo amin‘ny sehatra iraisam-pirenena. Tsy mifanaraka intsony amin’ny takin’ireny fihaonambe iraisam-pirenena nandraisan’i Madagasikara anjara ireny ny RGPH tamin’ny taona 1993.
Roa ihany taorian’ny Repoblika voalohany ny nisy fanisana mponina, ny taona 1975 : 7,4 tapitrisa ; ny taona 1993 : 12,3 tapitrisa ; tokony hatao manaraka ny taona 2003, saingy nahemotra hatrany ary izao 2018 izao indray vao vita ka hampahafantarina amin’ny volana desambra ny valiny.